बजेट राम्रोसँग अध्ययन नगरी आलोचना भयो–डा. पुष्प कंडेल [भिडियो अन्तर्वार्ता]
काठमाडौं, २० जेठ– आगामी आर्थिक वर्ष २०७५÷०७६ को बजेट आएलगत्तै सत्तापक्षका केही सांसद, प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रैस र निजी क्षेत्रले बजेट अस्पष्ट भएको भन्दै आलोचना गरेका छन् । संघीयताको पूर्ण कार्यान्यनका लागि आएकोे बजेटमा ठूलो जनअपेक्षा भए पनि बिगतका वर्षकै निरन्तरताजस्तो बजेट आएको भन्दै आलोचना भइरहेका छन् ।
यता सरकारले भने रोजगारी र कामको सुरक्षालाई प्राथमिकतामा राखेर उद्योगधन्दालाई प्रोत्साहन गर्ने नीति बजेटमा भएको दाबी गरेको छ ।
राष्ट्रिय योजना आयोग उपाध्यक्ष डा. पुष्प कंडेलले सरकारले संघीयतालाई सम्बोधन गर्ने बजेट ल्याएको दाबी गर्दै बरु सांसद तथा बजेट कार्यान्वयनमा काम गर्नेहरुले नै संघीयता बुझ्न नसकेको आरोप लगाए । उनले भने, ‘यहाँ केन्द्रदेखि संघीयताको पद्दतिहरु बुझ्न सकेको होइन कि जस्तो लागेको छ, बजेट बन्दा ९० देखि ९५ प्रतिशत मानिसहरु हाम्रो योजनाहरु पार्दिनुस् भनेर आउँछन् । यो पनि समस्या छ नि !’
बजेट राम्रोसँग अध्ययन नगरी आलोचना मात्रै भएको कडेलले बताएका छन् । लोकान्तर बिजनेश शोमा कुरा गर्दै कंडेलले बजेट संघीयतालाई ख्याल गर्दै आएकाले सबै मिलेर कार्यान्वयन गर्नुपर्ने आवश्यकता भएको छ ।
सरकारले प्रभावकारी काम गर्नका लागि सञ्चारमाध्यम र प्रतिपक्षी दलहरुले गरेको आलोचनालाई अन्यथा लिन नमिल्ने कंडेलले बताए ।
गोर्खा सैनिकलाई गोरासरह सेवासुविधाका लागि निर्णायक संघर्ष गर्छौं: कृष्णबहादुर राई [अन्तर्वार्ता]
पूर्व लडाकूको खुलासा– गृहमन्त्रीका सल्लाहकारले 'तँ मर्' भनेपछि विष पिएँ [भिडियो अन्तर्वार्ता]
जनताको भर्‍याङ चढेर सिंहासनमा पुगेका ओलीले जनअपेक्षामा तुषारापात गरे : खगेन्द्र संग्रौला [भिडियो अन्तर्वार्ता]
धादिङ अस्पताललाई वाटर डिस्पेन्सर प्रदान धादिङ- धादिङबेसी बजारस्थित महालक्ष्मी विकास बैंकले मंगलवार धादिङ अस्पताललाई तीन थान वाटर डिस्पेन्सर उपलब्ध गराएको छ । उक्त बैंकको २५ औं वार्षिकोत्सवका अवसरमा प्रबन्धक खिलप्रसाद ...
इन्डोनेसियामा जोको विडोडो पुनः राष्ट्रपति घोषित